सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जेठ ११, २०७५ शुक्रबार १७:२६:३९ | गोपाल गुरागाईं
वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण भएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मधुमास सकिएको छ । मधुमासकालमा दुुई पार्टीको एकीकरण भएसँगै सरकारले ५ वर्ष शासन गर्ने जनमतको म्याण्डेट पनि संस्थागत भएको छ । ओली सरकारको मधुमासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण नै हो ।
यो उपलब्धिसँगै सरकार बलियो भएको छ । तर, मतदातालाई चुनावताका वाम गठबन्धनले देखाएको सपना सरकारले कसरी पूरा गर्छ भन्ने अन्यौल आज पनि त्यही छ, जहाँबाट वाम गठबन्धनले एकीकरणको यात्रा सुरु गरेको थियो । अथवा देशले समृद्धिको यात्रा कुन बिन्दुुबाट सुरु गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि अन्यौलमा छ ।
अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमै बलियो सरकार हो । चाहेको भए सरकारले सय दिनमा हेर्दा साना तर आम नागरिकले अनुुभव गर्न सकिने खालका केही काम गरेर देखाउन सक्ने थियो । तर, सरकारका सय दिनमा काम कम र कुरा धेरै भएका छन् । चीनको रेल नेपाल ल्याउने, काठमाडौंमा मेट्रो र मोनोरेल कुदाउने, देशभर बिजुली रेल कुदाउने र हिन्द महासागरमा नेपालको झण्डा फहराउँदै पानी जहाज कुदाउने जस्ता ठूला कुरा सय दिनमा दुुई सयपल्ट भन्दा धेरै भए । तर, गर्न सकिने सानातिना काममा सरकारको ध्यान गएन । सरकारले गर्न सक्ने सानातिना काम अहिले पनि असरल्ल परेर बसेका छन् ।
कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो । चाहेको भए मालपोत, नापी तथा जनताका सरोकारका कार्यालयमा घुसबिना काम हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो । तर बितेका सय दिनमा आम नागरिकले राहत अनुुभव गर्ने परिवर्तन भएन ।
सरकारले सम्बृध्दिका ठूला ठूला कुरा गरेको छ । सुशासनका कुरा पनि बाक्लै गरिए । तर समृद्धि कसरी ? विकासका प्राथमिकता के ? नागरिकको व्यावसायिक र सामाजिक सुरक्षाका आधार के हुन् ? नेपालको अबको विकासको प्राथमिकता मोटर बाटो हो कि रेल हो ? सोपान समृद्धिका लागि लगानीका स्रोत के हुन र कसरी परिचालित हुन्छन् ? अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन्छ कि अहिले जस्तै व्यापारमुखी रहन्छ ? राजस्वको मूल स्रोत उत्पादन हो कि अहिलेको जस्तो भन्सार असुली मात्रै ? विकासका काममा नागरिकको संलग्नता र सहभागिताको मोडेल के हुन्छ ? नागरिकलाई समृद्धि र विकास अभियानमा कसरी सामेल गरिनेछ ? यस्ता तमाम प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउञ्जेल सरकारले गर्ने समृद्धिका कुरा फगत नागरिकको सपना र भावनासित गरिने खेलवाड मात्र हुन्छन् ।
सपनाहरुको व्यापार राजनीतिमा अस्वाभाविक होइन । सपनाको व्यापार यसअघिका राजा र सरकारले पनि गर्दै आएका हुन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री कठोर कारावासमा छँदा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई २०४३ सालसम्ममा एसियाली मापदण्डमा पुुर्‍याउने सपना देखाएका थिए । त्यो सपना ०४२ साल लाग्दा नलाग्दै तुहियो । प्रधानमन्त्री भएपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । त्यो ०५२ साल नपुुग्दै तुहियो । नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना त धेरैपल्ट धेरै नेताले देखाए । पछिल्लोपल्ट प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो सपना बाँडे । तर विकास र प्रगतिका ती सपना फगत सपना मात्र सावित भए । सरकारले सपना देखायो, तर कहिल्यै पूरा गर्न आवश्यक ठानेन ।
अहिलेको सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पनि पहिले पहिले देखाइएका सपनाभन्दा खासै फरक छैन, खाली सपना देखाउने पात्र र सपना बुन्न प्रयोग गरिएका शब्द मात्र फरक हुन् । त्यसैले आफूले देखाएको सपना सरकारले पूरा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने बेला भैसकेको छैन । बितेका सय दिनमा यी सपना समाज रुपान्तरणका लागि अघि सारिएका हुन् भनेर विश्वास गर्ने आधार बनेका छैनन् । तर, ओलीले देखाएका सपना अधुरै रहन्छन् भनेर अविश्वास गर्ने बेला पनि भैसकेको छैन । सय दिनका काम हेरेर र कुरा सुनेर यस सरकारलाई पहिलेका सरकार जस्तै ठानेर अहिले नै अविश्वास गर्नु धेरै हतारो हुन्छ । तर आँखा चिम्लेर सरकारलाई विश्वास गरि हाल्ने आधार पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन ।
कुरा ठूला, खुट्टा लुला !
देशको राजनीति, विकास, सुशासन, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारीजस्ता तमाम विषयहरु देशको गृह र अर्थ नीतिले तय गर्दछन् । त्यसैले सरकारको स्रोत, साधनको परिचालन, विदेश सम्बन्ध र विकास जस्ता नागरिकका सपनाहरु मूलतः गृह र अर्थ मन्त्रालय कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नीति र योजनामा भर पर्छ । नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा गृह प्रशासनको हातमा हुन्छ भने अर्थ नीति र प्रशासनले नागरिकको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी, खर्च, कमजोर समुदाय र वर्गको आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार सफल हुने एउटा मुख्य कारण गृह र अर्थबीच तादात्म्य थियो । २०१५ सालमा बीपी कोइरालााको सरकार असफल हुने कारण पनि गृह र अर्थ प्रशासनसित सम्बन्धित थिए ।
ओली सरकारले यी दुुई मन्त्रालयको महत्ता बुुझेरै हुनुपर्छ अर्थमन्त्री युुवराज खतिवडाले २०७४ साल चैत १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्नुुभयो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसलगत्तै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुुभयो । तर, श्वेतपत्रका ७६ बुँदा समस्या देखाउन केन्द्रित थिए भने सरकारको कार्यदिशा के हुन्छ भन्नेमा कुरामा ६ वटा बुँदा मात्र समावेश गरिए । गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ८२ बुँदे कार्ययोजनामा पनि देशको अर्थतन्त्र तस्करका हातमा रहेको कुरालाई धेरै जोड दिइयो, तर नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र समाजको अमन चयन कसरी कायम हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका आएन ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ ओली सरकार गृह र अर्थ नीतिका विषयमा एकहदसम्म चिन्तित त देखिन्छ, तर सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलमलिएको छ । आफ्नो बाटो पहिल्याउन सरकार अलमलिएको हो भने सय दिनमा सरकारले थालेको प्रयासबाट आशा गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ । तर रंगीन सपना मात्र बेच्ने नियत साथ यस्ता प्रचारमुखी काम भैरहेका हुन् भने ढिलो चाँडो त्यो पनि नागरिकलाई थाहा हुने नै छ । अहिले चाहिँ शंकाको सुविधा दिएर सरकारको नियत जाँच्ने कामका लागि अझै केही समय कुर्नुुपर्छ ।
यो सरकारका अगाडि चुनौतीका स–साना ढिस्का मात्र छन्, ठूला पहाड छैनन् । सरकारसामु समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न अपार र अनगिन्ती सम्भावनाहरु छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसहितको शासन प्रणाली नेपालका लागि विकेन्द्रीकरणको नयाँ अभ्यास हो । यो नयाँ अभ्यासको शासन प्रणालीमा काम गर्न अहिलेको सरकारलाई जस्तो मौका छ, यो सितिमिति कसैले नपाउने मौका हो ।
वाम गठबन्धनका दुुई पार्टी एक भएपछि संघीय संसदमा अहिलेको सरकारलाई लगभग दुई तिहाईको बहुमत छ । नवगठित सातमध्ये ६ प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड बहुमत छ । संघ र प्रदेशमा झैँ देशका लगभग दुुईतिहाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेकपाको सत्ता छ ।
सरकार चलाउन र संरचनागत परिवर्तन गर्न यस्तो दुर्लभ अवसर हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारले सय दिनमा मतदातालाई जति आश्वस्त पार्न सक्थ्यो वा पार्नुपथ्र्यो, पार्न सकेन । बलियो हुँदाहुँदै पनि सरकारको सय दिन फासफुसे काममा बितेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा बलियो देखिए पनि सरकारका कामले ‘कुरा ठूला, खुट्टा लुला’ भन्ने नेपाली उखानलाई झलझली सम्झना गराएका छन् ।
भारतसँग खुल्ला र चीनसित चुपचापको सम्बन्ध
यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुुई देशबीच भ्रमणको आदान प्रदान सकिएको छ । ओलीका लागि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार जति महत्वपूर्ण हो, यस बीचमा भारतले पनि सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । व्यक्तिगत रुपमा यो प्रधानमन्त्री ओलीको परिपक्वता हो भने सरकारको लागि अहिलेसम्मको यो ठूलो उपलब्धि हो । तर, बोआओ सम्मेलन र ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमणलाई छाँयामा पार्ने गरी र प्रभावित पार्ने गरी भ्रमण आदान प्रदानका मिति तय भए । ओलीको अडानी चट्टान फुटेको हो वा यो उनको चातुुर्य हो भन्ने कुरा पनि समयले नै देखाउनेछ ।
दुुवै प्रधानमन्त्रीको आपसी भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भारतीय दूतावासको विराटनगर फिल्ड अफिस बन्द हुनु हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका समय नेपाल सरकारले गरेको आग्रह अनुरुप भारतले विराटनगरमा राखेको आफ्नो कार्यालय हटाएको छ । अरुण तेस्रोको उद्घाटन, रेल निर्माण सम्झौता, जनकपुरका लागि एक अर्बको सहायता घोषणा अहिलेसम्म तपसिलका कुरा हुन् । विगतमा भएका यस्तै अलपत्र सम्झौता र उद्घाटनले यी पूरा हुने वाचा कम र प्रचारबाजीका हतियारमात्र हुन् भन्ने देखाएको छ ।
भारतले नेपालसँग सुरु गरेको सम्बन्ध सुधारको अन्तरनीहित आशय र उद्देश्य ओली चीनसित धेरै नजिक हुन नपाउन् भन्ने देखिन्छ । सय दिनमा चीनसँग सम्बन्ध बलियो पार्ने ओलीको अभियानमा भारत पटक–पटक बाधक देखिएको छ । तर अलि अचम्मको कुरा के भने ओली सरकारले पनि भारतले चाहेजस्तै चीनसितको सम्बन्धलाई लो प्रोफाइलमा राख्न खाजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
बितेका सय दिनमा पनि चीनबाट उच्चस्तरका भ्रमण भए । तर ती भ्रमणको खासै प्रचार भएन । सरकार र चिनीयाँ राजदूतको भेटघाट बाक्लै छ भन्ने कुरा दूतावासको वेबसाइटमा राखिएका सूचना र फोटाले पनि देखाउँछन् । तर आम नागरिकबीच चीन र नेपाल सरकारबीच भैरहेका यस्ता भेटघाटको खबर खासै बाक्लो देखिँदैन ।
त्यसो त चीनसित काम पनि बाक्लै हिसावले भैरहेका छन् । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु हुने अवस्थामा छ । चिनियाँ संलग्नतामा केरुङ्–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भैरहेको छ । भनिन्छ, चीन मौन कुटनीतिमा र भारत हल्लामा विश्वास गरेर चल्छन् ।
शक्तिशाली चीनको उदयसँगै तिब्बतबारे युरोप अमेरिकाको अधिक चासोका कारण नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाको स्वार्थ सीधै जोडिन्छ । त्यसैले नेपालमा भारत र अमेरिका जति सक्रिय छन्, चीन पनि अहिले त्यसै स्तरमा तर चुपचाप सक्रिय भैरहेको छ । चीन नेपालमा भारतको अति संलग्नता र अमेरिकाको अति चासो कमजोर बनाउदै लैजाने रणनीतिमा छ । त्यसैले आगामी दिनमा ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारत र चीनको नेपालसित जोडिएको स्वार्थलाई सन्तुलित बनाउनु हुुनेछ ।
आशा र अन्यौलको दोबाटोमा
ओली नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीले यसबीचमा केही राम्रो र आशलाग्दा काम सुरु गरेका छन् । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेटको वैधानिक रुपमा अन्त्य भएको छ, तर सरकारले सिन्डिकेटको विकल्प र सुविधाजनक सार्वजनिक सवारी साधनको भरपर्दो आधारको सामान्य खाका समेत अघि सारेको छैन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झैँ सिन्डिकेटवालाहरुको जगजगी व्यवहारमा यथावत नै छ ।
सरकारले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत विद्यमान रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, सिन्डिकेटको अन्त्यपछि अहिले सिन्डिकेटवालाले दिएको सेवा कसले कसरी दिन्छ, त्यसको खाका सार्वजनिक भएको छैन । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट असारपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने लगभग पक्का छ, तर आम नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा चुल्ठे मुन्द्रे आतंकबाट कसरी मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा सरकारले सांकेतिक रुपमा पनि देखाउन सकेको छैन ।
यसबीचमा केही राम्रा कामका थालनी भएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । विमानस्थल केही सफा भएको छ । यात्रुका सामान तुलनात्मक रुपमा छिटो र सुरक्षित रुपले बेल्टमा आउन थालेका छन् । राजविराज विमानस्थल फेरि खुलेको छ । वीर अस्पतालको सफाई राम्रैसित भैरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगहरुमाथि कारबाही हुन थालेको छ । सुन तस्करीमा संलग्न केही प्रहरी र कारोवारी पक्राउ परेर कानूनको दायरामा पुुगेका छन् ।
सय दिनमा सरकारले सुरु गरेका यी निकै आशलाग्दा काम हुन् । तर यी सबै काम मन्त्रीको निजी सक्रियतामा मात्र सुरु भएका हुुन् । विमानस्थल सुधार गर्न मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दिनदिनै आफै विमानघाट धाउनुपर्‍यो । वीर अस्पताल सफा गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पद्मा अर्याल आफैले कुचो समाउनुपर्‍यो । सुन तस्कर गृहमन्त्रीको दवाव र स्वार्थ अनुरुप भएकाले मात्र पक्राउ परे । श्रम मन्त्रीको ताकेता र दवाव थाम्न नसकेपछि वैदेशिक रोजगारका केही ठग अहिले पक्राउ परेका छन् । स्पष्टै छ, यी आशलाग्दा काम मन्त्री र केही कर्मचारीको उत्साहका भरमा सुरु भएका हुन् । यी र यस्ता कामले निरन्तरता पाउन नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनसँगै कर्मचारी तन्त्रको मनोवृतिमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । तर त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
सुरु भएका केही काम हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वको आभाष गराउँदै देशलाई आर्थिक प्रगति गर्न अग्रसर छ भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । तर अनेक प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले आफूले बाँडेका सपना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी र संरचनागत सुधारका कुनै काम थालेको देखिँदैन ।
त्यसैले अहिले सुरु भएका काम केही दिनपछि अलपत्र पर्ने वा मन्त्रीको प्राथमिकतामा नपर्ने वा कर्मचारीको सरुवासँगै पहिलेकै अराजक अवस्थामा फर्कने खतरा ज्यूँका त्यूँ छ । आशा गराैँ, त्यसो नहोस् ।
इन्फाेग्राफ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ट्विटरबाट
अन्तिम अपडेट: असार ९, २०७७
गोपाल गुरागाईं चार दशकदेखि छापा र रेडियो पत्रकारितामा हुनुहुन्छ।
दशैँअघि नै सिसडोलमा ल्याण्डफिल साइट : मन्त्री मानन्धर
असोज ४, २०७७ आइतबार
आईपीएल २०२० : दिल्ली र पञ्जाबबीच खेल हुँदै
कोरोनाबाट विदेशमा २४४ नेपालीको ज्यान गयो
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी
जुम्लामा अनसनरत डा‍‍. गोविन्द केसीलाई अस्पताल सारियो
नेकपाको सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा सुरु
त्रिशूलीमा खसेको पेट्रोल ट्याङ्करका चालक र सह-चालक सम्पर्कमा
बिदामा आएकाहरु अब साउदी जान पाउने, रोजगारदाताको नो अब्जेक्स...
कोरोनाको प्रभाव कम गर्न संगित प्रशिक्षण
सुनको भाउ आज स्थिर
संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खालिफामा नेपाली झण्डा फहराइयो
बाढी प्रभावितका लागि युवाले जुटाएको सहयोग हस्तान्तरण
डोटीमा खाना पकाउने ग्यासमा पसलैपिच्छे भाउ फरक
पाल्पा : रिपोर्ट नआएपछि तानसेन नगरपालिकाकाे सेवा ठप्प, फोहोर...
भारतीय एप 'पेटीएम' गुगलले प्ले स्टोरबाट हटायो
लामो दुरीका सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
एकैदिन २ हजारभन्दा बढीमा काेराेना सङ्क्रमण
विदेशमा ट्राभल एजेन्सीले बढी भाडा लिए भने उजुरी गर्नुहोस्, हा...
भदौ ३१, २०७७ बुधबार
निःशुल्क उद्धारको निर्देशिकामा भएको समस्याको गाँठो फुकाउन छलफ...
कोरोनासँग जुध्नुपर्ने बेला पार्टीका कार्यकर्ता कता हराए ?
भदौ २४, २०७७ बुधबार
एक छाक खान नपाएर रोइरहेका नागरिकको आँसुले किन पोल्दैन ?
असोज २, २०७७ शुक्रबार
परदेशीको सपना : कतारबाट हिँड्दै नेपाल फर्कंदा
‘दूतावास गएर आयो भन्ने थाहा पाए कम्पनीले दुईजनाले गर्ने काम ...
भदौ २१, २०७७ आइतबार